शंघाईमा तीन दिन के गर्ने | यात्रा समाचार
शंघाईमा तीन दिन के गर्ने
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, संघाई
एसियाको सब भन्दा ठूलो शहर हो संघाई। यदि केहि हप्ता अघि हामीले ह Hongक aboutको बारेमा कुरा गर्यौं र त्यहाँ बस्नेहरूको संख्या शंघाई पछाडि छैन र यो एक सहर हो जुन विश्वमा बासिन्दाहरूको संख्या धेरै छ।
पोर्ट, वित्तीय केन्द्र र विश्वको यस भागको सांस्कृतिक केन्द्र एक महान यात्रा गन्तव्य हो। तपाईंलाई लाग्ला कि यसको बदनामी नयाँ छ तर वास्तविकतामा शंघाई एक शताब्दी भन्दा बढि चम्किरहेको छ, यसैले यसको धेरै इतिहास छ। Hours२ घण्टा लामो समय होइन तर कहिलेकाँही हामीसँग यति छ भने यहाँ एक छ शंघाईमा तीन दिन के गर्ने के गाईड।
1 शंघाईमा पहिलो दिन
2 शंघाईमा पहिलो दिन
3 शंघाईमा पहिलो दिन
शंघाईमा पहिलो दिन
सहर दुई भागमा विभाजित छ: Huangpu नदी को एक पक्ष मा छ पक्सी र अर्को पुडोंग। पक्सी पश्चिममा छ र पूर्वमा पुडोंग। आधुनिक शहरी परिदृश्यबाट सब भन्दा उल्लेखनीय चीज भनेको हो लुजियाजुई क्षेत्र, Pudong मा, जहाँ सबैभन्दा प्रतीकात्मक भवनहरू छन्: उदाहरणका लागि शंघाई विश्व वित्तीय केन्द्र, जिन माओ टावर, ओरिएंटल पर्ल टिभी टावर र शंघाई टावर। यहाँ टुरिज्म टनेल पनि छ, प्रकाश र ध्वनि कार्यक्रमको एक भूमिगत सुरुnel जुन भेट्न लायकको छ।
ओरिएन्टल पर्ल टावर: यो 468 1994 मिटर अग्लो छ र १ 2007 350 and र २०० between को बीचमा शहरको सब भन्दा अग्लो संरचना हो। यो १ fifteen वटा अवलोकन प्लेटफर्मको साथ रेडियो र टिभी प्रसारण एन्टेना हो, जसमध्ये स्पेस क्याप्सूल XNUMX XNUMX० मिटरमा छ। योसँग एक घुम्ने रेष्टुरेन्ट छ, दुई क्षेत्रहरूको बीचमा, र निस्सन्देह, उत्कृष्ट विचारहरू।
विश्व वित्तीय केन्द्रयो विश्वको आठौं सबैभन्दा अग्लो भवन हो र 492 360२ मिटर अग्लो छ। वेधशालामा गिलास फ्लोर र विन्डोज छन् जुन ºº०º दृश्यहरू प्रदान गर्दछ।
जिन माओ टावर: यहाँ सबै कुरा भाग्यशाली संख्या,, को वरपर घुम्छ, किनकि मन्डारिन चिनियाँ भाषामा, आठ शब्दले "समृद्धि" भन्ने गर्दछन्। Flo 8 फ्लोर र ज्याज बार।
सुरुnel प्रतीक्षा: यो 647 XNUMX मिटर अग्लो टुरिस्ट टनेल हो कि Huangpu नदी मुनि पार गरी Bund लाई लुजियाजुई संग जोड्छ। हडताल गर्ने र विचित्र साइट।
यहाँ तपाईं अलिक हिंड्न सक्नुहुन्छ, यी राक्षसी भवनहरूको आधारमा एकदम सानो महसुस गर्नुहोस् वा राम्रो, राम्रो उचाइबाट फोटोहरू लिनको लागि वित्तीय केन्द्रको वेधशालामा चढ्नुहोस्। यो शंघाईको सब भन्दा क्लासिक पोष्टकार्ड हो र यदि तपाईले यो शहर पहिले नै चिन्नु भयो भने यो अचम्मको कुरा हो किनभने s० को दशकमा यो क्षेत्र बिरलै विकसित भएको थियो ... यदि तपाईं यस इलाकामा बस्नुहुन्न भने तपाईं सबवेबाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ।
आवासको कुरा गर्ने हो भने, यदि तपाईं सबैभन्दा सिफारिश गरिएको क्षेत्र भ्रमण गर्न जानुहुन्छ भने हुआang्पु नदीको छेउछाउ भएको क्षेत्र हो किनभने यो त्यहाँबाट आएको हो जहाँ तपाईंसँग नदीको शानदार दृश्यहरू छन्। आकाशगंगा शंघाई बाट पुराना क्षेत्रहरु चित्ररहित छन्, उदाहरण को लागी फ्रान्सेली छूट, तर यो सबै तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ।
दिनको लागि हो बन्ड हिंड्नुहोस्, धेरै ईतिहासको साथ क्षेत्र। परिदृश्य छ २० औं शताब्दीको सुरुतिर भवनहरूनदीको छेउमा। यदि तपाइँ आँखाहरू खोल्नुहुन्छ, तपाइँसँग उही पनोरमिक दृश्यमा बीसौं र एक्काइसौं शताब्दी छ, किनकि लुहियाजुको प्रोफाइल त्यहाँ छ, अर्कोतर्फ, यदि मौसम राम्रो छ वा त्यहाँ धेरै प्रदूषण छैन।
तपाईं यहाँ वरिपरि हिंड्न सक्नुहुन्छ, क्याफेटेरियामा खाजामा बस्न र केही समयको लागि हिंड्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंसँग केही नजीकको पूर्वी नानजिंग रोड सबवे स्टेशन छ। तपाईं लाइन १० मा पुग्नुहुन्छ र बन्द हुनुहोस् युयुआन गार्डन। तपाइँ चिनियाँ भवनहरू बीच वा हिड्दै जानुहुन्छ भने स्थानीय ग्यास्ट्रोनोमीको प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, जुन अद्भुत छ। बगैंचा १ 20 औं शताब्दीको अन्तमा सिर्जना गरिएको थियो र २० हजार हेक्टरमा ओगट्यो।
प्रवेश CYN or० वा costs० लागत, वर्षको समयको आधारमा, र बिहान :40: .० देखि 30::8:30 बिहान खुल्छ। यदि तपाईं खाजाको लागि बस्नुभयो भने तपाईं पछि सबवेमा फर्केर जान सक्नुहुन्छ पश्चिम नानजिj रोड भ्रमण गर्न जिingगान मन्दिर, मूल तेस्रो शताब्दीबाट तर पुनर्निर्माण र धेरै सुन्दर, गगनचुम्बी भवनहरूको बीचमा। को फ्रान्सेली छुट यो दिउँसो बिताउनको लागि राम्रो ठाउँ हो, एउटा आकर्षक रेस्टुरेन्ट खोज्नुहोस् र पूर्व र पश्चिमको बिरूद्धमा यी विरोधाभासहरू हेर्नुहोस्।
अन्तमा, तपाईं फेरि मेट्रो लिन र मा जान सक्नुहुन्छ शहर वर्ग। यदि तपाइँ भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ भने शंघाई संग्रहालय , तपाइँलाई बन्द नगर्नुहोस्! जब सूर्य सडकमा जान्छ नानजिing रोड यो हुनु राम्रो स्थान हो। मुख्यतया पूर्वी क्षेत्र, जहाँ त्यहाँ बार र रेष्टुरेन्टहरू र धेरै प्रकाश छन्।
यदि तपाईं शहरको साथ प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईं यसलाई छोड्न चाहनुहुन्न तर यदि तपाईं अझै कभर गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिम दिनमा तपाईले केन्द्रबाट अलि टाढा यात्रा गर्नु पर्छ। त्यहाँ ऐतिहासिक शहरहरू छन्, जस्तै सूजौ o हान्जगुउ (शंघाईबाट एक घण्टा, तालको तटमा र धेरै सुन्दर), हो अन्जी बाँस वन, जहाँ तपाईं ट्रेन वा ट्याक्सी द्वारा पुग्नु र जहाँ यो चित्रित थियो Crouching टाइगर, हिडन ड्रैगन, र त्यहाँ चong्गमि Island आइल्याण्ड नेचर रिजर्व पनि छ।
मेट्रोबाट तपाईं अन्जीमा जान सक्नुहुन्छ, लाइन १ वा using को प्रयोग गरेर शंघाई दक्षिण रेलवे स्टेशन पुग्न। यसको छेउमा टर्मिनल छ बसहरु र पहिले राम्रो, बिहान9बजे भन्दा पहिले किनभने त्यहाँ कुनै बस छैन। बक्स अफिसमा तपाईं टिकट किन्नुहुन्छ र त्यसपछि यात्रा चार घण्टा गोल यात्रा हुन्छ। यात्राले तपाईंलाई उत्साहित पार्दैन, तर गन्तव्य गर्दछ। तपाईं आञ्जीको शहरमा आइपुग्नुहुन्छ, स्टेशन छोड्नुहोस् र ट्याक्सी वा टुक-टक भाँडामा वनमा आधा घण्टामा पुग्नुहोस्।
प्रवेश 55 XNUMX युआन को बारे मा छ। त्यहाँ प्रवेश द्वारमा केही रेस्टुरेन्टहरू छन् र तपाई बाँस खान सक्नुहुन्छ, तपाईलाई के लाग्छ? भित्र तपाईं सुन्दर परिदृश्यहरु मा हराउन सक्नुहुन्छ र तपाईं पनि साना रूखहरु बीच उडान अधिक yuan० युआन को लागी एक रोलर कोस्टर चढ्न सक्नुहुन्छ। फिर्ती यति सजिलो छ। यदि तपाईं आइपुग्नुभयो र त्यहाँ शंघाई जाने कुनै थप बसहरू छैनन् भने, तपाईं ह Hang्जाउ जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट ट्रेन वा बसमा शंघाई जान सक्नुहुन्छ।
स्पष्ट रूपमा यी तीन दिनहरूमा शंघाईका धेरै किनाराहरू भ्रमण गर्नका लागि छन् (संग्रहालयहरू, मन्दिरहरू, बजारहरू), तर मेरुदण्डको रूपमा यो 72२ घण्टाको यात्रा निकै उपयोगी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » शंघाईमा तीन दिन के गर्ने
नमस्ते, म कार्लोस हुँ, म मोन्टे ग्रान्डे, ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टिनामा बस्छु। उनीहरूले दिएको जानकारी मेरो अर्को चीन यात्राको लागि धेरै मूल्यवान छ। धन्यवाद
T चालहरू एयरपोर्ट सुरक्षा नियन्त्रणमा समय बचत गर्न